ALAHADY 11 AVRIL 2004
Accueil Ny Mpitandrina Perikopa ALAHADY 11 AVRIL 2004
Perikopa : Asa 10 : 34 - 48 ; Kolosiana 3 : 1 - 4 ; Marka 16 : 1 - 8
" Aza talanjona ; mitady an’i Jesoa avy any Nazareta, Izay nohomboana tamin’ny hazo fijaliana ianareo ; efa nitsangana Izy ; tsy ato Izy ; Jereo fa teo no nametrahany Azy "( Marka 16 :6).
Efa nitsangana Izy ! hatramin’ny nahariana izao totolo izao dia mbola tsy nisy zava-niseho lehibe noho ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tsy nisy ny fivavahana kristiana, tsy nisy kristiana ary tsy misy Filazantsara ary tsy misy famonjena velively raha tsy nisy fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty. " Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo.Ary hita ho vavolombelona mandainga ny amin’Andriamanitra izahay...ary mbola ao amin’ny fahotanareo ihany ianareo "( I Kor 15 :14-17) hoy ny Apostoly Paoly. Ny fizotran’ny tantara koa dia mety ho hafa be ; satria tamin’ny alalan’ny fitsanganany tamin’ny maty , dia nasehon’i Jesoa Kristy mazava sy miharihary ny maha Zanak’Andriamanitra Azy ; Andriamanitra tonga nofo teto an-tany nandresy sy nandrava ny herin’ny fahafatesana , ilay fahavalo farany( II Tim 1 :10), Andriamanitra velona manoro ny olona ny làlan-tsara mankany amin’ny fiainan-danitra.
Ny olona tsy mino an’Andriamanitra dia milaza fa tsy nisy ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty , fa angano sy arira noforonon’ny mpianany fotsiny izany. Tsy nantenain’ny mpianatra ny hitsanganan’i Jesoa , na dia efa nolazain’i Jesoa tamin’izy ireo matetika fa tsy maintsy mijaly Izy, dia hovonoina, ary hitsangana amin’ny andro fahatelo( Mat 16 :21 ;17 :9,23 ;20 :19 ; Marka 8 :31 ; 9 :31 ; Lioka 9 :22,44 ; 18 :22-25). Raha tafiditra tao an-tsain’ny mpianatra farany ny hoe :ho faty Jesoa, dia namoy fo izy ireo ; tao ny latsa-bava mihitsy hoe : " andeha koa isika mba hiara-maty Aminy "( Jaona 11 :16).
Raha nijanona eo ami’ny fahafatesan’i Kristy fotsiny isika dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra ( I Kor 15 :19). Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia zava-misy mifamatotra amin’ny tantaran’izao tontolo izao, tahaka ny fahaterahany ihany koa. Rehefa nesorina avy teo amin’ny Hazofijaliana ny tenan’i Jesoa, dia napetraka tao amin’ny fasana vaovaon’i Josefa avy any Arimatia. Nahita tsara ny Jiosy fa nasiana tombo-kasen’ny governora romana ny varavaram-pasana sady nambenan’ny miaramila romana koa. Nefa na dia teo aza ny fikelezan’ain’ny fanjakana nahery indrindra teto an-tany, dia nitsangana marina tamin’ny maty tokoa araka izay nanambaran’ny Soratra Masina Azy Jesoa. Tsy voatanan’ny fasana Izy satria Andriamanitra Rainy dia " tsy hamela ny Iray Masiny ho tratry ny lo "( Sal 16 :10). " Avia jereo !fa teo no nametrahany Azy "( Marka 16 :6) , izany hoe tsy ao am-pasana intsony Izy ; Foana ny fasana !
Koa raha tsy nitsangana tamin’ny maty Jesoa, dia nankaiza ary ny fatiny ? Eo anatrehan’ny tsy finoan’ny sasany, manoloana ny fisalasalan’ny hafa ; isika izay mino dia mahalala fa raha nitsangana tamin’ny maty Jesoa Kristy Tompo, dia niseho tamin’ny mpianatra, hitan’ny masony, notsapain’ny tànany, niara-nisakfo sy niara-dia, nifampidinika sy nitafa taminy. Niaraka tamin’izy ireo im-betsaka nandritra ny 40 ando. Izy dia niseho tamin’ny olona izay vavolombelona notendren’Andriamanitra ( Asa 1 :3 ; 10 :40-41 ; I Kor 15 :6). Paoly no nahita Azy farany. Koa nataon’i Paoly ho votoatin’ny toriteniny ny amin’i Jesoa voahombo nefa nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo. Ao amin’ny I Kor 15 dia milaza mazava i Paoly fa resy lahatra tanteraka izy noho ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ka ataony ho rehareha ny fitoriana izany Vaovao Mahafaly izany.
Inona moa no zavatra entin’ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty eo amin’ny olombelona ?
" Efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita "( Apok 1 :18 ). Nataon’i Jesoa Kristy zavatra hita maso sy azo tsapain-tànana ny fanantenan’ny olona rehetra izay mino ny amin’ny fitsanganana amin’ny maty. Azo antoka ny hitsanganan’ny tenan’ny mino amin’ny maty satria Kristy, Izay inoana no santatr’izay efa nodimandry( I Kor 15 :20). Noporofon’ny fitsanganany tamin’ny maty ny maha Zanak’Andriamanitra an’i Jesoa ; ary manamafy orina ny fanekem-pinoan’i Petera, izay nisolo vava ny mpianatra rehetra.
Noho ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty dia tomombana sy tanteraka ny asa famonjena na fanavotana, satria natolotra noho ny fahadisoantsika Jesoa, nefa natsangana indray ho fanamarinana antsika ( Rom 4 :25) ; ary azo antoka tanteraka fa neken’Andriamanitra ny fanavotana vitany ( Rom 8 :34).Niankina tamin’izany fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty izany ny fitoriana ny famelan-keloka ; ary ao Aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin’ny heloka rehetra ( Asa 13 :32-39).
Ry havana, fiainam-baovao, ara-panahy, no entin’ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty ho an’ny mino Azy. Izay miray Aminy dia hiara-mandeha Aminy amin’ny fiainam-baovao ( Rom 6 :1-11), hiara-mandova Aminy ny lovan’ny olona masina satria natsangany ho zanak’Andriamanitra , ho rahalahiny sy anabaviny ka afaka miantso an’Andriamanitra hoe " Aba !Ray ! ".
Velona Jesoa ! foana ny fasana , efa resy izao ny fahafatesana. Raha mila famonjena ianao, dia aza mitady izany any amin’ny toeran’ny maty.Fa katsaho kosa ao amin’i Jesoa Kristy Zanak’Andriamanitra Velona ! Izay mahatonga ny olona marobe, eny fa na dia kristiana aza, ho reraka, osa, misalasala, kivy, ketraka, malahelo, dia satria mbola any amin’ny maty no hitadiavana an’i Jesoa na koa any no heveriny ahitana fitahiana ; noho ny tsy faharetana amin’ny tenin’Andriamanitra. Koa mifohaza !mitsangana dia hampahazava anareo Kristy !